ANDRO MAHAFINARITRA HANDRENESANA NY FILAZANTSARA – filazantsaramada
ANDRO MAHAFINARITRA HANDRENESANA NY FILAZANTSARA
Publié parfilazantsaramada	 janvier 20, 2017 janvier 19, 2017 Laisser un commentaire sur ANDRO MAHAFINARITRA HANDRENESANA NY FILAZANTSARA
« Ary izy namaly ka nanao hoe: « Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra » ; ary « tiava ny namanao tahaka ny tenanao ». Lioka 10:27
Ny teny fikasana dia nomen’Andriamanitra an’i Abrahama telo-polo amby efa-jato taona mialoha ny lalàna, nefa ny fanekena dia tsy tsoahan’ny lalàna. Noho ny amin’ny nofo dia tsy efan’ny olona ny lalàna. Soa ihany fa nisy ny Filazantsara izay nahatanterahan’I Jesosy ireo lalàna: hoy Izy hoe VITA. Ny lalàna dia voafehy ao anatin’ny Hazo Fijalian’i Kristy:
1- Fitiavana an’i Jehovah Andriamanitra( hazo mijidina)
2- Fitiavana ny namana (hazo mitsivalana)
Ny tantaran’ilay samaritana tsara-fanahy dia manambara ny fanadinoan’ilay mpisorona sy ilay levita ny fitiavana ny namana, ka ilay samaritana indray no nahatsiaro izany . Na dia ny mitia ny namana aza tsy haintsika. Maty isika noho ny tsy fahatanterahantsika ny lalàna fa velona kosa isika ao amin’i Kristy. Aoka ho raisintsika isan’andro ny Filazantsara: Kristy maty, ary nitsangana ho antsika. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Publié parfilazantsaramada janvier 20, 2017 janvier 19, 2017 Publié dansUncategorized